साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा, करिब १७ अर्बको शेयर कारोबार | News Polar
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा, करिब १७ अर्बको शेयर कारोबार
न्यूजपोलार जेठ २०, २०७८, बिहिबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च २ हजार ८५६ दशमलव ७७ विन्दुमा पुगेको छ । यो दिन परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनभन्दा २९ दशमलव ५५ अंक अर्थात् १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले बढेको हो ।
त्यस्तै ठुला कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात ७ दशमलव ९६ अंकले बढेर ५१३ दशमलव ११ विन्दुमा पुगेको छ । आज शेयर बजारमा रू. १६ अर्ब ९० करोड ७० लाख २० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएर कारोबार रकम र कित्तामै वृद्धि भएको हो । २१८ ओटा कम्पनीको १ लाख ५५ हजार ६५५ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको ३ करोड ४६ लाख ९१ हजार ३१२ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
बिहीबारको बजारबाट वित्त, होटल्स तथा पर्यटन र विकास बैंकका शेयरधनीहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । यो दिन विकास बैंकको समूहगत परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव ७४ प्रतिशत बढेको छ भने वित्तको ३ दशमलव ३४ प्रतिशत र होटल्स तथा पर्यटनको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यसैगरी बिहीबार पनि सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नै भएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रू. १ अर्ब २ करोड ७० लाख २७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । उक्त कम्पनीको बिहीवार भने प्रतिकित्ता रू. २५ ले मूल्य घटेको छ । यस दिन कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ७६५ कायम भएको हो । बिहीवार उक्त कम्पनीको ५ लाख ७१ हजार ११५ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
प्रकाशित : जेठ २०, २०७८, १६:०१:०६